Igbo - 01. Conversation - Booklet 5: Ebube iri nke Kraist nime kor'an | Grace and Truth
Home -- Igbo -- 01. Conversation -- 5 Miracles of Christ
5 - EBUBE IRI NKE KRAIST NIME KOR'AN
Olee Otú Anyị Ga - esi Jiri Ihe K'an'an Na - ekwu Banyere Kraịst?
Koran kwuru na Kraist rụrụ ọrụ ebube. Gini bu ọlu iri nke Kraist nke Kriast? Kedu ka enwere ike iji ha soro ndị Alakụba kerịta Kraịst? Chọpụta site n’ịmụ akwụkwọ a.
5.02 -- Ihe ebube nke Kraist - ihe negosi maka ozi Chineke?
5.03 -- Ihe àmà nke Kraist (bayyinaat)
5.04 -- Ihe ịrịba ama dị ebube nke Isa na Muhammad ('aayaat)
5.05 -- Kraist na ekwu okwu dika nwa ohuru
5.06 -- Isa na - eme nnunu
5.07 -- Ngwọta nke ndị ìsì
5.08 -- Isa na-asacha ndị ekpenta
5.09 -- IỊkpọte ndị nwụrụ anwụ
5.10 -- Onye Omuma
5.11 -- Tebụl si n'eluigwe
5.12 -- Ọ bụ onye omeiwu Chineke
5.13 -- Kraịst na-eme ka ndị na-eso ụzọ ya gbanwee
5.14 -- Ezi Ayatollah
5.15 -- Nnoycha
5.01 -- Ebube iri nke Kraist nime kor'an
Muhammad chọrọ iji merie ndị Kraịst na Arabian Peninsula maka Islam. Ya mere, o gbara ha aka maka ihe ọ nụrụ banyere Jizọs site na ndị ohu Ndị Kraịst, site na ndị nnọchiteanya nke ụka dị na North Yemen, ndị si njem si Etiopia, na n'aka ndị Hanif bụ ndị Kraịst ugbu a. Nwa nke Meri masịrị Muhammad na ọrụ ebube ya. Ọ ghọtara na ọrụ ebube ya karịrị ike nke mmadụ ma weere ha dị ka ihe àmà (bayyinaat) nke ikike Chineke (Suras al-Baqara 2:87, 253; Al-Ma'ida 5:110, al-Zukhruf 43:63, al-Saff 61:6).
Muhammad kwuru maka ọrụ ebube itoolu nke Mozis rụrụ n'Ijipt, nke ọ na-akpọkwa ihe àmà (Suras al-Baqara 2:99, al-Asra '17:101). Ma ọrụ ebube nke Moses bụ ọtụtụ ntaramahụhụ nke Allah kpatara Ijipt iji hapụ ụmụ ohu Jacob. Otú ọ dị, ọrụ ebube Jizọs dị na kor'an, dị ka ngọzi sitere na Allah na-edu ụmụ Israel ịtụkwasị obi na irubere Aịza isi.
Muhammad nọ na-enweghị ike na ya onwe ya enweghị ike ịrụ ọrụ ebube ma ọ bụ na-adịghị mma. Ọ pụghị ịghọta ihe mere ọtụtụ ndị Juu ji nwee obi ike ka ha ghara ịnakwere ihe àmà dị ịrịba ama nke Nwa nke Meri, ma jụrụ ma kpọọ ya asị.
● Na Sura al-Baqara anyị na-agụ na Isa apụghị ịrụ ọrụ ebube ya n'enweghị enyemaka nke Mmụọ nke Onye Nsọ (Sura al-Baqara 2:87). Muhammad chere na Allah zitere Djibril (Gabriel) ka o wusie Ọkpara Mary ike ka o wee nwee ike ịrụ nnukwu ọrụ ebube ya. Muhammad kwuru na nkwupụta a bụ na Kraist enweghị ike ịrụ ọrụ ọ bụla n'onwe ya. Iji mee ya ha chọrọ enyemaka nke onye ozi si Allah, onye ọ kpọrọ Mmụọ nke Onye Nsọ.
A na-asụgharị aha a n'ụzọ na-ezighị ezi dị ka "Mmụọ Nsọ". Na kor'an Allah n'onwe ya bụ "Onye Nsọ", mmụọ bụkwa ohu ya. Mm] nke Onye Nsọ adighi ns] nime onwe ya, Odighi kwa Chineke. Ọ bụ ihe okike nke Onye Pụrụ Ime Ihe Niile. Mkpụrụ mmụọ a dị na kor'an ekwesịghị ikwe ka Mmụọ Nsọ nke Oziọma ahụ ghara ịdị mgbagwoju anya, ọ bụ ezie na Muhammad gaara eche na mmụọ nke Onye Nsọ bụ ezi Mmụọ Nsọ nke wusiri Nwa nke Mary ike. Ya mere, Muhammad ga - adị ka ọ kwadoro na ịdị n'otu nke Atọ n'Ime Otu dị n'otu, n'ihi na na kor'an atọ - Allah, Mmụọ ya na Kraịst - wetara ọrụ ebube ahụ ọnụ!
Muhammad enweghị ike ịghọta na ndị Juu na-ajụkarị ihe àmà nke ndị ozi nke Allah, mana ha kpọrọ ha ndị ụgha na ọbụna gbuo ụfọdụ (Sura al-Baqara 2:87)!
● N'otu Sura (al-Baqara 2:253) Muhammad kwupụtara na e nwere ọdịiche dị ukwuu n'etiti ndị ozi nke Allah. Ọ họọrọ ibe ya ma nye ya ọkwa ka elu. Mozis gwara ya okwu kpọmkwem, nke ọ na-emeghị Muhammad. Ndị nke ikpeazụ natara ihe ndị a na-akpọ ya site na mmụọ a ma ama, nke o mesịrị kpọọ Djibril. Muhammad n'onwe ya hụrụ Allah, ma ọ bụ nụrụ ya! O nweghị onye ọ bụla ya na Chineke na-akpakọrịta.
Dika kor'an si kwuo, Allah mere ka nwa nke Meri guzosie ike karia Moses, n'ihi na o nyere ya ihe omuma puru iche (bayyinaat) site na iwusi ya ike nke Mo Nso. Muhammad gbapuru isi ya maka iwe ilu nke ndị Juu na ndị Kraịst megide ibe ha nakwa na ha kewapụrụ n'agbanyeghị ihe ùgwù ndị a (Sura al-Baqara 2:253). Ọ hụrụ na ha ekwekọrịtaghị na ịmara ọdịnihu nke Allah na Islam dị ka ụyọkọ nke atọ ga-emeri mmeri n'elu ìgwè abụọ a na-alụ ọgụ. Muhammad aghọtaghị na Ọkpara Chineke a kpogidere na ezi omume nke ndị mmehie, ma e wezụga ezi omume, bụ isi ihe kpatara esemokwu n'etiti ndị Juu na ndị Kraịst. Ndị Alakụba na ndị Juu na-ahụkarị ibe ha karịa Ndị Kraịst na ndị Alakụba!
● Na Sura al-Ma'ida anyị na-agụ otu n'ime okwu anọ Allah nyere n'aka Kraịst na kor'an (Sura al-Ma'ida 5:110). O kwuru, sị: "Cheta amaram nke m nyere gị na nne gị mgbe m wusiri gị ike na Mmụọ nke Nsọ." Mgbe nke a gasịrị, e depụtara ọtụtụ ọrụ ebube nke Kraịst bụ nke mechiri okwu ahụ bụ na Allah mere ka ụmụ Israel laghachi azụ site n'aka Isa, nke mere na ha enweghị ike igbu ya, ọ bụ ezie na ọ na-abịakwute ha n'ụzọ doro anya (bayyinaat). Ha we kpọ ya asì, si, Ihe-efu ka ọ bu.
N'amaokwu a, Kraist biara dika onye enyere ya na mmụọ nke Allah. Nke a gosipụtara na na kor'an nwa nke Meri enweghị ikike ọ bụla ma ọ bụ ikike Chineke. N'otu oge ahụ, Muhammad kwupụtara ọrụ ebube dị iche iche nke Aịza ma kpọọ ha ihe àmà nke ikike ya, Allah nyere ya ikike. Muhammad apụghị ịghọta ịdị umeala n'obi nke Kraịst, mgbe ọ gọnahụre onwe ya wee nye Nna ya nsọpụrụ niile, na-asị, "Ọkpara ahụ apụghị ime ihe ọ bụla n'onwe ya; ọ ga-eme ihe ọ hụrụ Nna ya na-eme, n'ihi na ihe ọbụla nke Nna ahụ na-ahụ Ọkpara ya eme." (Jọn 5:19)
● Na Sura al-Zukhruf anyi na-aguta ihe omuma nke nkpughe nke Kraist (Sura al-Zukhruf 43:63): O biaruru ndi Ju "amamihe" ka ha we meghe anya ha maka ihe kpatara nkpa ha na nkwekorita ha. Ma eleghị anya, Muhammad anụwo banyere ozizi Jizọs na Matiu 7:1-28 site na ọdịnala okwu, ma kọwaa okwu Kraịst dịka mbọ iji mee ka ndị mmegide ahụ dịghachi. N'ụzọ dị otú a, Isa rịọrọ nrubeisi ha na-enweghị isi na ha ịla n'okpuru iwu ya.
● Dị ka Sura al-Saff si kwuo, 'Isa bịakwutere ụmụ Israel iji gosi na e mehieghị Torah (Sura al-Saff 61:6). Nkọwa a pụrụ iche maka nzube nke ọbịbịa Isa na-enye anyị ohere igosi ndị Alakụba na Akwụkwọ Nsọ adịghị agbanwe agbanwe, n'ihi na, dị ka kor'an si kwuo, ọrụ mbụ nke Kraịst bụ iji kwenye na ndị mmadụ na-emeghị ihe ọjọọ.
Otú ọ dị, nzube kasịnụ nke nbịbịa Isa, nzube ikpeazụ nke ọrụ ebube ya, dịka kor'an, bụ nkwa nke Ọkpara nke Mary gosipụtara na mgbe ọ gasịrị, onye ozi dị ebube nke Allah ga-abịa. Amụma a Muhammad mere ka ya bata n'ọnụ Isa! Kemgbe ahụ, ndị Alakụba achọgharịwo na Bible maka aha zoro ezo nke Muhammad, nke pụtara n'ụzọ nkịtị "Onye A Gọziri Otuto." Ọtụtụ ndị ọkà Muslim kwuru na Muhammad bụ Parakletos ahụ e kwere ná nkwa, Mmụọ nke Nkasi Obi. Iji mee ka okwu Grik a dabara Muhammad, ndị Alakụba gbanwere ụdaume nke Parakletos na Periklytos, nke pụtara "Onye a na-asọpụrụ nke ukwuu". N'ihi ya, ndị Alakụba na-ebo Ndị Kraịst ebubo na ha kpuchiela amụma nke Aịa banyere Muhammad n'ime Oziọma, ma ọ bụ ehichapụ aha ya na Bible.
N'amaokwu atọ nke kor'an, a na-akpọ ọrụ ebube nke Jizọs ihe ịrịba ama ('aayaat') nke ọrụ Chineke ya (Sura Al-Imran 3:49.50, al-Ma'ida 5:114). Okwu nke Muhammad jiri me nka ka apuru ihuta na ozioma nke Jon iji kọwaa ihe iriba ama nke Jizos. N'ebe ahụ, anyị na-agụ, "Nke a bụ nke mbụ nke ihe ịrịba ama ya nke Jizọs rụrụ, bụ nke o si kpughee ebube ya." (Jọn 2:11 + 12) Ọtụtụ ndị kweere n'aha ya mgbe ha hụrụ ihe ịrịba ama ya nke o mere (Jọn 2:23). Mgbe ọ gwọrọ nwa onye ọrụ nche site n'ebe dị anya, Jọn kpọrọ nka na-agwọ ihe ịrịba ama ọzọ Jizọs mere (Jọn 4:54). Mgbe ndị mmadụ hụrụ ihe ịrịba ama (nke inye nri nke 5000) ha kwuru, sị, "N'ezie onye a bụ Onye Amụma nke ga-abata n'ụwa." (Jọn 6:14) Otú ọ dị, mgbe Jizọs hụrụ na ha gbakwuru ya ka ha mee ya eze, n'ihi ọrụ ebube nke achịcha ahụ, ọ hapụrụ.
Jizọs emeghị ihe ịrịba ama ya ka ndị mmadụ wee kwere na ya, ma na ha kwesịrị ịnakwere ịhụnanya ya, ikike ya na ikike zuru oke nke chi ya. Jizọs achọghị ka ndị mmadụ soro ya maka ọrụ ebube ya, ma ọ tụrụ anya nchegharị na imeghari. Jizọs dọrọ ndị mmadụ aka ná ntị wee sị, "Ọ bụrụ na ị hụghị ihe ịrịba ama na ihe ebube, ị gaghị ekweta." (Jọn 4:48) N'akwụkwọ Oziọma anyị, anyị gụrụ ọtụtụ ugboro na Jizọs machibidoro ndị ọ gwọrọ ịkọrọ banyere onye ahụ gwọrọ ha (Matiu 9:39; Mak 3:12; 5:43; 7:36; Luk 5:14; 8:56; 9:21).
Mgbe a kpagburu Jizọs na egwu ya na Jerusalem, ìgwè mmadụ ahụ chọrọ ịhụ ọrụ ebube gbakụtara ya azụ. Naanị ndị na-eso ụzọ, bụ ndị kwupụtara mmehie ha n'ihu Jọn Onye Na-eme Baptizim na onye nwebigara obi mpako site na nchegharị, nọgidere na-ekwesị ntụkwasị obi nye Jizọs. Ha hụrụ otuto ya ọbụna mgbe a kpagburu ya wee nwụọ n'elu obe. Mgbe ndị Juu nwara Jizọs ma rịọ ka o nye ya ihe ịrịba ama iji gosipụta ikike na ozi ya, ọ zara ha, sị, "Kwatuo ụlọ nsọ a, m ga-akpọlite ya ọzọ n'ụbọchị atọ!" (Jọn 2:18-22) O kwukwara, sị, "Ọgbọ ọjọọ na-akwa iko na-achọ ihe ịrịba ama, ma a gaghị enye ya ma ọ bụghị ihe ịrịba ama nke Jona onye amụma." (Matiu 12:39-40; 16:4)
Ihe àmà na ihe ịrịba ama ndị Muhammad kwuru na Isa na kor'an na-anwa imepụta kpọmkwem nkwenkwe nke Jizọs jụrụ! Ya mere, ayi ekwesigh ighota ihe omuma nke Kraist nye ndi Alakụba n'ihi na ha bu ihe iriba ama, ma kwesiri ikwusi ike na ha nekwu aka n'ebube ya, ima, idi umeala n'obi, idi nso na ikike. Jizos Kraist n'onwe ya kwesiri inye otuto site n'ikwu ihe ebube ya. Ọrụ ebube enweghị otuto nke aka ha. Ngwọta ọrụ ebube ọ bụla nke na-adịghị eduga ná nchegharị na imeghari ohuru adabaghị okwukwe na Jizọs.
Ugboro atọ anyị na-achọta akụkọ dị ịtụnanya na kor'an banyere okwu nke nwa amụrụ ọhụrụ nke nwa Meri, ka na-edina na nri anụ ụlọ. Naanị okwu nke okwu ya ka a kpọtụrụ aha ugboro abụọ (Suras Al Imran 3:46, al-Ma'ida 5:110), a na-agụta ihe dị n'okwu ya na Sura Marjam (19:24-33).
Akụkọ a na-atụghị anya ya na nwa ọhụrụ ahụ bụ Isa nwere ike ikwu okwu n'ụzọ zuru oke, ndị nkọwa na kor'an kọwara ya n'ụzọ dịgasị iche. Ụfọdụ na-asị, 'Isa dị naanị minit ole na ole, ndị ọzọ na-eche ọtụtụ awa, ruo mgbe ọ ga-ekwupụta mkpụrụ edemede, okwu na ahịrịokwu na-enweghị ihe ndapụta. Ekepụtara ụbụrụ ya site na mgbe a mụrụ ya, na nghọta ya, mmetụta na ikike ezi uche dị na ya zụlitere n'ime obere oge, ma ọ bụ otú ha si ekwu.
Gini mere ndi okachamara Muslim kwere ma kwue banyere ihe a? Ha na-agụ na kor'an na Kraist bụ "okwu nke Allah" n'onwe ya. Onye Pụrụ Ime Ihe Nile kụziiri ya Torah, ilu Ilu Solomọn, Oziọma, na Akwụkwọ mbụ dị n'eluigwe, tupu a mụọ ya (Sura Al-Imran 3:48). Amuru ya n'ime uwa juputara na ihe omuma, amamihe na ike ikwu okwu. Ọ ghaghị ikwupụta okwu Chineke site na mgbe a mụrụ ya ruo ọnwụ. Ọ dị ka mkp Luk ughe nke mkpughe si n'aka Onyenwe ya.
K'anụ na-egosi na nwa nke Meri abụghị mmadụ efu, kama mmụọ nke Allah n'anụ ahụ. O sitere na gburugburu nke Onye ebighebi (Sura Al-Imran 3:45) ma nwee oke omuma na ikike ime mmuo karia nke madu efu obula.
Okwu ndị a dị na kor'an na-abịaru nso na nghọta Ndị Kraịst banyere ọdịdị nke Ọkpara Chineke n'ime Oziọma ahụ. Ma n'ebe ahụ ka a mụrụ Jizọs dị ka ezigbo nwa ọhụrụ e kere n'ákwà. Meri nne ya agwaghị onye Grik bụ Luke ihe ọ bụla banyere okwu nwa ya nwoke mere mgbe ọ mụsịrị ya, n'ihi na dịka nwatakịrị, o nweghị ike ikwu okwu ma chọọ oge iji zụlite (Luk 2:40, 52).
Ebee ka akụkọ akụkọ a si malite? Na apocryphal akụkọ ozioma nke ndi Siria na ndi Coptic, ayi choputara ihe omuma di otua. Ndị nne na-abụ abụ banyere obere nwa banyere Jizọs nye ụmụ ha iji mee ka ha hie ụra. Ihe omuma nke omuma banyere nwa Jisos onye nekwu okwu mara uzo taa.
Muhammad nụrụ ụdị ụmụ akụkọ si Siria ohu na Coptic Kraịst na - kweere na ha! O kwenyere karịa Nna nke Chọọchị, bụ onye na-agụnyeghị akụkọ ndị dị otú ahụ n'ime Bible, dị ka ha na-emeghị. Ya mere, Muhammad pụtara na ọ bụ onye na-achọ eziokwu, ma ọ bụ onye amụma. Ọ pụghị ịkọwa n'etiti akụkọ ifo na eziokwu.
N'ihe banyere ihe a na-akpọ okwu nke nwa amụrụ ọhụrụ nke nwa Meri (Sura Maryam 19:24-33) nwa ahụ chọrọ ka mbụ kasie nne ya nwanyị nkasi obi n'ihi na ọ mụrụ ya n'ebughị di na nwunye. Ọ maara na a ga-atụ ya nkume. Ya mere, nwa amuru a Isa gbara ya ume site n'ikwu na ya amuwo onye di egwu n'okpuru uzo di n'ala ozara.
N'asụsụ Arabic, otu okwu maka onye a ma ama bụ suriyun, nke nwere ọtụtụ surawaa ', asriyaa' ma ọ bụ saraat (ihe nile sitere na S-R-W nke Arabic). Ma ndị na-agụ ekworo nke kor'an gbanwere ụdaume na ihe okwu a pụtara "obere mmiri ma ọ bụ mmiri" (nke Arabic bụ sariyun) site na-enweta ya site na mgbọrọgwụ S-R-Y nwere ọtụtụ asriyat ma ọ bụ suryaan. Ndị na-agụ akwụkwọ Muslim nọ na-ewe iwe n'ihi na e meela ka Isa dị ka nwa amụrụ ọhụrụ dị elu karịa Muhammad, n'ihi ya, ha gbanwere ụdaume na ihe sitere na 'àgwà dị iche iche' iji 'rivulet', ọ bụ ezie na nkọwa ha na-eme ka uche ghara ịdị.
Nwatakịrị a mụrụ ọhụrụ gwara nne ya ka o mee ka ogwe osisi gbanye ya ma mee ka mkpụrụ osisi dakwasị onwe ya ka o wee nwee ike iwusi onwe ya ike mgbe a mụsịrị nwa ahụ. Lee ihe mgbagwoju anya nke Bedouin! Ọtụtụ ụmụ nwoke enweghi ike ịkwa jijiji. Kedu ka nwatakịrị ga-esi mee nke a mgbe ọ mụsịrị nwa? N'ụbọchị Muhammad, ndụ ndị Bedouin siri ike, ugboro abụọ dị ike maka ụmụ nwanyị na nne.
N'ikpeazụ nke okwu mbụ ya, Isa gwara nne ya na-achọsi ike ihe ọ ga-agwa onye ọ bụla ga - ajụ ya banyere mmalite nke nwa amụrụ ọhụrụ na o kwere Chineke Onye na - eme ebere ngwa ngwa ma ghara ịgwa onye ọ bụla n'ụbọchị ahụ. Ya mere, ihe mbu na-atụ aro na nwa ọhụrụ bụ Isa kụziiri nne ya bụ aghụghọ, aghụghọ, na ụgha, iji chebe ya pụọ n'ihe ize ndụ ozugbo.
Akuko ahu gara n'ihu igosi otua nwatakiri ahu si gbachitere nne ya megide obodo ndi iwe iwe site n'igosi onwe ya dika onye amuma ndi amara na nwa ya nke abuo na kor'an.
Ndị na-atụle akụkọ a n'echeghị echiche ga-ahụ otú nrọ na eziokwu si emetụta ma ghọọ Fata Morgana n'ime uche nke Muhammad. K'anụ dum bụ eziokwu na akụkọ ifo.
Site na otu akwukwo apocryphal we bia na ihe omuma atu: Nwa Jisos mere nnunu site na ugbo, gbanye ya, ya mere nnunu! (Sura Al-Imran 3:49, al-Ma'ida 5:110). Anyị ga-achọ ichefu akụkọ a na-ezighị ezi nke Ọkpara Mary, mana maka eziokwu ahụ nwere ihe atọ dị mkpa.
N'asụsụ Al-Imran Isa na-agwa ụmụ Israel, "M ga-ekepụtara gị nnụnụ nnụnụ na ụrọ." Na Sura al-Ma'ida Allah, mgbe nrịgo nke Isa, kwadoro, "I kere anu nke nnunu!" A na-agba aka ọrụ ebube a na kor'an dị ugbu a na n'oge gara aga, otu ugboro site na Isa na otu site Allah n'onwe ya. Nkwenye abụọ a na-eme ka ederede dị mkpa.
N'ebe abụọ anyị nụrụ na Isa nwere ike ịmepụta nnụnụ dị ndụ na ihe na-adịghị ndụ. N'asụsụ Arabic, a na-agụkarị okwu ahụ bụ "mepụta" (khalaqa) na Allah, onye okike, bụ onye kere ihe niile n'enweghị ihe ọ bụla. Ma otu okwu a puru iche bu nka bu Isa, kwa. Ọ bụ naanị mmadụ, dị ka kor'an, si bụrụ onye okike ma nwee ike ịmepụta ndụ site na ihe nwụrụ anwụ. Kraịst na Islam yiri ka ọ bụ onye okike.
Otú ọ dị, Muhammad kwụsịrị ịsọpụrụ Nwa nke Meri ma mee ka okwu ahụ bụrụ, "site na ikike nke Allah!" ọtụtụ ugboro n'ime amaokwu ndị kor'an na-akọ banyere ọrụ ebube nke Kraịst. Ya mere, anyị nwere ike ịjụ ndị Alakụba siri ike, "Ị kwenyere n'ezie na Kraịst, site n'ikike nke Allah, nwere ike ịmepụta nnụnụ site n'ihe ndị nwụrụ anwụ?" Azịza ya nwere ike ịbụ, "N'ezie, kor'an kwadoro ugboro abụọ a!" Mgbe ahụ, anyị nwere ike ịgwa ya na Ọkpara Mary bụ onye okike pụrụ iche - site na ikikere Allah!
Akụkọ a n'akụkọ ihe mere eme akụkọ nwatakịrị nwere ihe ijuanya ọzọ. Isa weliri nnunu ugbo ya n'onu ya ma gbaa ya. Ụrọ ahụ wee dịrị ndụ, nnụnụ ahụ wee gbapụ. Dika kor'an si kwuo, 'Isa na-eburu ume nke ndu ya n'ime ya - ya bu na Chineke kwere ya, n'ezie!
Baibul, Chineke wuru "ume nke ndu" nime Adam. Ma otu a ka e kere mmadụ mbụ (Jenesis 2:7). N'ụbọchị Ista, Jizọs na-eku ume n'ahụ ndị na-atụ egwu ya ma nwee obi ụtọ ma sị ha, "Nata Mmụọ Nsọ!" (Jọn 20:22) Mgbe ahụ, ndị na-eso ụzọ ya dị ndụ, n'ihi na Kraịst bụ mmụọ na-enye ndụ (1 Ndị Kọrịnt 15:45).
Otú ọ dị, Muhammad agaghị na nke ahụ na akụkọ ya. Mgbe Isa na-adaba n'ime ihe na-adịghị ndụ, ọ bụghị mmadụ, ma ọ bụ nwa a mụrụ nke Chineke, kama ọ bụ naanị ihe dịka nnụnụ! Muhammad ekweghị ịgọnahụ na Jizọs n'onwe ya nwere mmụọ na-enye ndụ nke onye okike.
Akụkọ banyere okike nke nnụnụ nyere ndị nkọwa Kansan ụfọdụ isi ọwụwa, n'ihi na ọ bụrụ na Isa nwere ike ịmepụta nnụnụ dị ndụ site na ihe nwụrụ anwụ, ọbụna site na ikikere nke Allah, mgbe ahụ, ọ dị elu karịa mmadụ niile, ọbụna karịa karịa Muhammad. Ya mere, ụfọdụ ndị ntụgharị okwu na-ede, "Isa chọrọ imepụta anụmanụ anọ ma ọ bụ nnụnụ na-efe efe, ma ha abụọ mehiere. Ihe sitere na mgbalị ya bụ 'bat', nke na-abụghị nnụnụ ma ọ bụ anu anụ ahụ, ma ha abụọ n'otu oge ahụ." Anyị nwere ike ịza ndị nkatọ dị otú ahụ, "bat bụ naanị anụmanụ na-efe efe nke a na-emepụta nke ọma, n'ihi na ọ na-eburu otu ngwaọrụ (dị ka radar) n'ọnụ ya wee nwee ike ịgba ọbụna n'abalị, dị ka ụgbọ elu nke oge a!"
Mgbe ihe iriba ama abua nke omuma Jisos, ndi Muhammad abugh ihe zuru oke, ebe obu na ha wepu ha site n'akwukwo apokrafa nke ndi nwatakiri oge, ayi guru akuko banyere Kraist n'onwe ya, nke Allah kwadoro na Isa nwere ike ime ka otutu ndi isi mmadụ (Sura Al-Imran 3:49, al-Ma'ida 5:110).
N'akụkọ ndị a, anyị na-ahụ ebere nke Kraịst nye onye ọjọọ nke na-apụghị ịhụ ìhè nke anyanwụ ma sụọ ngọngọ n'ọchịchịrị. Nwa nke Meri, dika kor'an si di, emeghi ihe iriba ama maka ihe ngosi ma obu iji merie ndi eze na ndi isi maka onwe ya, kama n'ihi na o choro inyere ndi oria aka, ndi mmadu nwere nsogbu na ndi mmadu a na-achupu. Obi ebere na ịhụnanya ya mere ka ọ rụọ ihe ịrịba ama ya.
Okwu nke Arabic maka "ịgwọ" (bari'a) dị na kor'an jikọtara ya na echiche nke "ịkwado" ma ọ bụ "ịsacha". Ọ bụrụ na Chineke na-ele ọrịa anya dịka ntaramahụhụ nke Allah maka mmehie ndị zoro ezo, mgbe ahụ, Kraist agwọghị ọrịa ahụ kama ọ gwakwara ya ihe kpatara ya.
Jizọs emeghị ka anya ndị ìsì kpuo ya mma, ma ọ bụ n'amara laser, ọ chọghịkwa ọgwụ ọ bụla ma ọ bụ ọgwụ nje, kama ọ gwọrọ ha naanị okwu ya. Ozoghi anwansi, ihe ndi ozo ma obu ndi di iche iche di iche iche, ma o wepuru nhụjuanya, ndi mmadu ojoo site na ochichi ha site n'okwu ya di ike. O doro anya, Muhammad gbakwụnyere okwu ikpe ahụ: "na ikike Chineke!" Ka o sina dị, onye ọ bụla nwere ike ịmara ikike nke Jizọs Kraịst na ịhụnanya ya n'ebe eleghara anya na akwụkwọ ndị Alakụba.
Site na kor'an Muslim adịghị amụta nkọwa banyere otú, ebe, mgbe ma ọ bụ onye Jizọs meghere anya. N'ihi ya, ihe odide ndị a dị mkpa maka akaebe nke ndị akaebe anya na Oziọma ndị ahụ. Anyị ga-emeghe Bible na amaokwu ndị ahụ maka ndị Alakụba nwere mmasị, ma anyị ekwesịghị ịgụ akụkọ ahụ n'onwe anyị ma gbaa ha ume ịgụ akụkụ ndị ahụ maka onwe ha, ka ha wee nwee ike imeri ha ma were Akwụkwọ Nsọ n'aka ha wee hụ Jizọs na anya nke obi ha. Ya mere, ha nwere ike ịmata na Jizọs adịghị amanye onye ọ bụla ịnakwere enyemaka ma ọ bụ ọgwụgwọ ya, ma chere ruo mgbe ndị ọrịa bịakwutere ya ma ọ bụ tie mkpu maka enyemaka. Jizos choro ime kao chiogwo ndi ah náegbu ah, rue mgbe ha ro rogwo. O kpaliri n'ime ha ịtụkwasị ya obi na ike ya, ka o wee nwee ike ịnapụta ha ibu ha. Obereghi na ọgwụgwọ na-abịa ma ọ bụrụ na otu onye anaghị atụkwasị dọkịta nke ndị dọkịta nile obi. Kraist adighi amanye onye o bula amara ya, kama o na-ewulite n'ime ha uche, okwukwe na ịhụnanya maka ya, onye mgbaputa ha. Jisos putara aka madu n'arita aru, site n'ikwu, "okwukwe gi gwowo gi." (Matiu 8:22; Mak 5:34; 10:52; Luk 7:50; 8:48; 17:19; 18:42). Ihe a nile bu ihe di iche nye onye Alakụba. Ọ ma onye nzọpụta ma ọ bụ onye inyeaka. Tụkwasị na Kraịst, Onye mgbapụta ya, kwesịrị ịzụlite, ka o wee too nime ya n'ụzọ ime mmụọ.
N'akwụkwọ abụọ nke ndị Kansin banyere ịsacha na ịgwọ ndị ekpenta, ihe àmà nke Isa na Allah kwadoro ọrụ ebube ndị a (Sura Al-Imran 3:49, al-Ma'ida 5:110). A na-ede ederede Arabic maka ndị ekpenta a na-agwọ ọrịa dị iche iche, ma ọ pụtara ụdị ụkọ nke na-ekpuchi ndị a na-arịa ọrịa. Dị ka ndị ìsì, nke a apụtaghị otu ọrụ ebube, ma ọtụtụ usoro ọgwụgwọ dị ebube nke Kraịst mere na ndị ekpenta.
Ọ bụrụ na ị zutere ụdị ahụhụ dị otú ahụ na ndị India, na enweghi mkpịsị aka na ihu efu, na-agba ọsọ ọnụ iji rịọ na ụlọ ọrụ juru, ị ga-aghọta oke ịhụnanya nke Jizọs, ebube ya na mmeri ya banyere iwe na egwu nke ọrịa. Ọ dịghị achụ ndị ekpenta ka ha bụrụ ndị na-adịghị ọcha, kama ha na-agwa ha okwu ma metụ ụfọdụ n'ime ha aka. O wuru ogidi maka okwukwe ha, ka ha wee ghọta: Jizọs a hụrụ m n'anya! Kraịst dị ike karịa ekpenta! O nwere ike ịgwọ m (Matiu 8:1-4; Mak 1:40-45; Luk 5:12-16). Mgbe Jizọs gwọrọ ndị ekpenta iri ahụ, ọ tụrụ anya ka ha nwee okwukwe karịrị mmadụ. Ha tụkwasịrị onye ahụ gwara ha okwu banyere ịhụnanya nke Chineke nke ha chere na ya (Luk 17:11-19).
Ihe K'an'an na-akọ bụ nanị ihe ndị bụ isi nke chọrọ ìhè nke Oziọma ahụ na àmà akaebe anyị: na o mere ka anyị dị ọcha pụọ na ajọ omume anyị niile na adịghị ọcha.
Iji gwọọ ndị ekpenta nwere ike ịgbakwunye mgbaghara nke Jizọs. N'ebe ụfọdụ, na-ewu ewu na Islam, a na-ele ekpenta anya dịka ntaramahụhụ nke Allah maka nnupụisi ma ọ bụ mmehie zoro ezo. N'ebe a akụkọ nke Akwụkwọ Nsọ banyere ịgwọ ọrịa nke onye ahụ ya kpọnwụrụ akpọnwụ nwere ike inyere aka. Ochere anya okwu Jisos nke Jizos gwara ya, kama o nuru, "Nwe obi, nwa, agbagharawo gi nmehie gi." Mgbe ndị ọkàiwu nke Torah chere na Jizọs na-ekwulu Chineke, o chigharịkwuuru ha wee sị, "Gịnị mere unu ji eche echiche ọjọọ n'ime obi unu? Olee nke ka mfe, ịsị, 'agbaghawo mmehie gị,' ma ọ bụ ịsị, 'Nweta "Ma ka i wee mara na Nwa nke mmadụ nwere ikike n'ụwa ịgbaghara mmehie ... ọ tụgharịrị nye onye ahụ ahụ ya kpọnwụrụ akpọnwụ ma sị, 'Bilie, buru ihe ndina gị lawa.' Nwoke ahu we bilie, la n'ulo-ya. (Matiu 9:1-8).
Ọ bụrụ na ị gụọ okwu mkpụmkpụ ahụ nke ekwenyero ugboro abụọ na kor'an na Jizọs nwere ike ịkpọlite ndị nwụrụ anwụ, ume gị nwere ike ịkwụsịtụ oge ụfọdụ (Sura Al-Imran 3:49, al-Ma'ida 5:110). N'amaokwu abụọ a, ị na-ahụ ụdị ọdịdị ahụ, ọ bụghị ihe dị iche iche! N'asụsụ Arabic nke pụtara na Kraịst tiri elu karịa abụọ, ma ọ bụ ma ọ dịkarịa ala mmadụ atọ site na ndị nwụrụ anwụ. Ọ bụ ihe amamihe dị na ya ịmara site n'akụkụ Akwụkwọ Nsọ ebe Jizọs kpọtere nwatakịrị, nwa okorobịa na okenye site na ndị nwụrụ anwụ, na ịgụ akwụkwọ ndị a na ndị Alakụba nwere mmasị (Matiu 9:18-26; Mak 5:21- 43; Luke 7:11-17; Luke 8:40-56; John 11:1-45).
K'anụ ji okwu abụọ dị iche iche mee ka a kpọlite ndị nwụrụ anwụ site na Kraịst. Na Sura Al-Imran (Sura Al-Imran 3:49) o kwuru, sị,
"M ga-eme ka ndị nwụrụ anwụ dị ndụ."
N'amaokwu nke ọzọ (Surah al-Maidah 5:110) Allah kwadoro,
"Ị na-eziga ndị nwụrụ anwụ (ndụ) puo (si n'ili ha)!"
Ọ bụrụ na ị mara onye Alakụba nke gosipụtara mmasị na Kraịst, ị nwere ike ịjụ ya na ntokọ aka abụọ ndị a na kor'an, "Ònye nwere ike ịkpọte ndị nwụrụ anwụ?" N'ọtụtụ okwu azịza ya bụ, "Ọ dịghị onye ma Allah." Ọ bụrụ na ị jụọ ọzọ, "Ị na-ekwu na nke a bụ na Kraist bụ Allah, ebe ọ bụ na ọ kpọghachitere ndụ ma ọ dịkarịa ala mmadụ atọ nwụrụ anwụ?" ị nwere ike ịnụ caveat, "m na mgbaba na Allah si gị!" Ọ bụrụ na ị nọgide na-ajụ, "Ma na kor'an ị na-ahụ amaokwu abụọ ebe Kraịst kpọlitere ndị nwụrụ anwụ n'ezie," ị nwere ike ịnụ azịza ya mgbe oge nchọtara, "Ma oge ọbụla ịchọtara okwu ahụ, 'na mnwere ikike' Kraist enweghi ike ime ka ndi nwuru anwu bilie, ya mere Chineke zitere Djibril ka o wusi ya ike, ka o wee mezuo ihe ebube nke ime ka ndi nwuru anwu bilie ka ha we nye Chineke otuto! " Ọ bụrụ na ị nọgide na-ajụ na-akpachara anya, "Ya mere, ị kwenyere na Allah na Mmụọ nke Nsọ na Ọkpara Mary kpọkọtara ndị nwụrụ anwụ?" I nwere ike nụ ihe na-adịghị mma, "Ee, nke ahụ kpughere na kor'an." Mgbe ahụ, i nwere ike ịza, "Ya mere, ị kwenyere na mmekọrịta nke Atọ n'Ime Otu?" Nke a nwere ike, mgbe mbido nke mbụ, dugara na nkwupụta ahụ bụ na kor'an na-akwado ịdị n'otu nke Atọ n'Ime Otu na-eme ihe, ọ bụ ezie na ọ dịghị akwado ya na mmụọ na ihe. Ọ dịghị mkpa na ndị Alakụba kwesịrị ikwenye site na arụmụka anyị niile. Mana o nwere ike inyere ya aka ịnụ ihe ọhụrụ e kwusiri ike na kor'an, ka o wee malite iche echiche n'ụzọ dị iche.
Eziokwu nke ndi nwuru anwu ka nwa nke Meri kpolitere bu ihe di ebube ka i we jua onwe gi ihe mere na kor'an Muhammad tinyere okwu ndia nke o nuru site na ndi Kristain ndi gbara ya gburugburu. Eleghi anya o mere ya ka o chee Islam dika okpukpere chi dika ndi Kristian iji merie ndi okwukwe ya.
Anyị tụkwasịrị obi na àmà nke onye meriri ọnwụ na kor'an ga-eme dị ka achicha, ọ ga-emeghe anya ndị Alakụba n'ime, ka ha wee mata ezi Kraịst ahụ nwere ndụ ebighi ebi n'ime onwe ya. Mgbe ahụ, ha ga-aghọta na Kraịst nwere ike inye ndụ onye ọ bụla rịọrọ ya ndụ ebighị ebi. Eziokwu ahụ bụ na Kraịst kpọlitere ndị nwụrụ anwụ n'ọnwụ bụ ihe ịma aka nye ụmụaka nile nke Abraham, ndị Juu nakwa ndị Alakụba: "Onye ọ bụla nke kwere na Ọkpara ahụ nwere ndụ ebighị ebi, ma onye ọ bụla nke na-ajụ Ọkpara ahụ agaghị ahụ ndụ." (Jọn 3:36; 1Jọn 5:12)
Na Sura Al-Imran anyị na-achọta amaokwu amaokwu nke Aịza gwara ndị Juu na ya ga-ekpughere ha ihe ha riri na nzuzo na akụ ndị dị n'ime ụlọ ha.
Akụkọ a na-enweghị atụ na-enye nkọwa dịgasị iche iche: Ọtụtụ ndị Juu anaghị edebe iwu Moses, ma na-eri ihe ndị a machibidoro na nzuzo. Ndị ọzọ anaghị eji nlezianya na-eme ụbọchị ndị a kara aka ma na-eri nri na nzuzo n'ụlọ ha ọ bụla ha chọrọ. Tụkwasị na nke ahụ, ha debere akụ ndị zoro ezo n'ime ụgbọ mmiri ha kama inye ha ndị ogbenye na ndị gbara ọsọ ndụ si Mekka.
Al-Suyuti, onye na-akọwa Islam, na-akọwa: 'Isa mgbe nwa okoro na-egwuri egwu na ụmụaka ndị ọzọ mgbe ọ gwara ha, "M nwere ike ibu amụma maka ihe ndị mụrụ gị na-eri mgbe ị na-apụ n'ụlọ, na ihe ha na-ezo na nzuzo zoro gị. " Mgbe ụmụ okoro a jụrụ ajụjụ banyere mkpughe ndị a, o juru nne na nna ha anya ma jụọ ụmụ ha, "Ònye gwara gị ihe nzuzo ndị a?" Mgbe umuaka azaa ya bu Isa onye gwara ha ihe omimi a, ndi nne na nna gbochiri umu ha ka ha na nwa nke Meri na-egwu egwu wee mechie ha n'azu ha.
Mgbe Isa mesịrị gwa ndị nne na nna nke ndị enyi ya ihe kpatara na ọ gaghị ahụ ha ọzọ, a gwara ya na ha anọghị n'ụlọ n'oge ahụ. Mgbe Isa zara ndi nne na nna, "Ma enwere m ike ka ha na-eme mkpọtụ n'azụ gị," ha gwara ya, sị, "Ndị a bụ nanị ezi pigs anyị." Isa wee legide ha anya ma zaa ya, "I kwesiri ya, obu nani ezì gi ndi na-eme udiri a n'onu gi." Mgbe ndi nne na nna choro umu ha, okwu Isa emezuwo. Ụmụ ha niile aghọwo ezi!
Akụkọ a na-awụ akpata oyi n'ahụ site n'echiche nke nkwutọ bụ maka ndị Juu ndị na-anaghị edebe ezì na azụ azụ ha, nakwa dịka Jizọs n'onwe ya, iji zere ụmụaka pụọ na ya, n'ihi na ọ nwere ike igosi eziokwu nzuzo. Otú ọ dị, ihe odide a sitere na kor'an na-egosi na Kraịst nwere ike ịhụ site na mgbidi! Dika Muhammad si kwuo, o nwere "anya X-ray". Na ozioma nke John ayi puru iguta na Jisos huru madu nile. Ọ dịghị mkpa maka ozi ọ bụla, "n'ihi na ọ maara ihe dị n'ime mmadụ." (Jọn 2:24-25)
N'amaokwu a, kor'an egosipụtara ihe niile gbasara Aịsa, mana ọ na-esi na ya pụta. Ọ bụghị ihe oriri na nzuzo, ma ọ bụ akụ zoro ezo nke Jizọs chọtara n'anya Onye Mgbapụta ya. Ọ na-ekpuchi mmehie ndị zoro ezo ma na-achọ na onye ahụ na-achọsi ikpe ziri ezi, ịdị ọcha na eziokwu. Ọ chọrọ ịzọpụta, mee ka mmadụ niile dị ọcha ma mee ka ọ dị ọcha, ma ọ chọghị itinye aka na akụnụba ha.
Muhammad kwụsịrị inwe ọgba aghara n'etiti ndị gbara ọsọ ndụ bụ ndị si Mekka na ndị mbụ bi na Madina bịa. Ndị kwabatara na Mekka adịghị enweta ọrụ, ha enweghị ụlọ ma ha enweghị ike iketa ihe ọ bụla site na ndị ikwu. N'aka nke ọzọ, ndị Alakụba nke Medinan malitere ịba ụba ma bawanye uru. Ndị nke a ejiriwo ndị ahụ na-abanye n'ụlọ ha ma kwe nkwa na ya ga-elekọta ha dịka ụmụnne nwoke ọbara. Ma ọchịchọ na eziokwu dị nnọọ iche. Ndị obodo ahụ riri nri dị mma mgbe ndị gbara ọsọ ndụ na-apụ, ndị nwe ụlọ wee zobe akụ ha n'aka ndị na-achọ ebe mgbaba. Muhammad nụrụ banyere omume a ma gaara achọ itinye aka ya n'elu akụ ndị ahụ zoro ezo. Ya mere, o kwuru, sị, "Mgbe Isa ga-abịaghachi, ọ ga-agwa gị ihe ị na-eri na nzuzo na ihe ị na-ezo n'ụlọ gị, n'ihi na ọ pụrụ ịhụ gị niile."
Anyị kwesịrị ichebara ihe àmà a sitere na kor'an na, mgbe anyị na-enye ndụmọdụ ndị mmụọ nsọ nke ndị Alakụba, mee ka ha mara na ọ dị anyị nile mkpa ịnwale ma kpuchie ya site n'ịhụ Jizọs Kraịst na eziokwu ya ugboro ugboro! Ego zoro ezo na ihe onwunwe nke Nd∫Kraist niile ga-ezu iji kwusaa ụwa dum, ma ™ b®r® na a ga-akpal∫ mmad® iche iche site na ak®k ™ ha nile.
Na Sura al-Ma'ida (5:112-115) anyị nwere ike ịchọta nkwughachi nke nri nke 5.000 site na Kraịst na ụdị islam. Anyị ga-asụgharị ihe odide a n'ụzọ nkịtị, ka e wee nwee ike iche echiche Muhammad na omume nke ndị Alakụba ya dịka ihe ndabere maka mkparịta ụka anyị na ha:
112 Ndi nēso uzọ-Ya si‚ ‘‘Ya, Aisa, nwa Meri! Onye-nwe-ayi gēsi n'elu-igwe zite ayi table nke nri?‘‘
Ọ zara (ha), "Na-atụ egwu Allah ma ọ bụrụ na ị bụ ndị kwere ekwe!"
113 Ma ha siri, "Anyi choro iri n'ime ya ka obi wee di anyi nma ma we mara na I kpugheere anyi eziokwu ahu, anyi gabu ndi akaebe anya ya (ya bu okpokoro)."
114 Aisa, nwa Meri we si, Chinekeumma, Onyenwe anyi, zite ayi table nke nri site n'elu igwe, ka oburu ihe oriri nye ayi na ndi mbu na ndi ikpe-azu n'etiti ayi. ihe ịrịba ama si n'aka gị! Nye anyị (na ndụ anyị kwa ụbọchị)! Ị bụ onye kachasị mma."
115 Allah zara ya, "N'ezie, ana m ezite ya (table nri) na gị ma ọ bụrụ na onye ọ bụla n'ime gị ka na-ekwenyeghi mgbe ọ gasịrị, m ga-ata ya ahụhụ nke ukwuu, ebe ọ bụ na anaghị m ata onye ọ bụla ọzọ n'ụwa!"
Na akụkọ a n'echiche gbasara inye nri nke 5.000 anyị na - ekwu dị ka ndị a:
● Ọtụtụ ugboro Muhammad dị iche n'etiti Ndị Kraịst dịka ntozu okè ha ma kpọọ ha ndị na-eso ụzọ (ndị nmalite), ndị enyemaka ma ọ bụ ndị agha na-anụ ọkụ n'obi, ndị kwere ekwe na-ekpe ekpere, ndị Alakụba, ndị na-eso ụzọ na ndị àmà (Elam 3:52-53). N'elu akụkọ nke okpokoro si n'elu igwe Jizos nagwa ndi neso uzo okwu dika ndi nmalite.
● Na kor'an, Aisaa onwe ya abughi "onye nweayi", ma Allah bu onye nwe ya. Ọ na-adị mgbe niile.
● Mgbe Isa kwusiri ozi oma ogologo oge n 'ozara ka agu guru ndi neso uzo. Ha echereghị ndidi ruo mgbe Isa nyere ha nri, ma 'nwaa' ya ma jụọ ike Chineke, ma ọ ga-enwe ike inyere ha aka. Ha ekwenyegh i n'ezie na ih u ih unanya ya kama ha ch or o igwa ya.
● Isa agbaghaghi ndi neso uzo ya ikwere, kama itu egwu Chineke. Ịhụnanya maka Chineke na ntụkwasị obi na nlekọta ya abụghị isiokwu ndị dị mkpa na Islam, kama nrube isi nye Allah na egwu na nkwanye ùgwù miri emi maka ya.
● Ndị Alakụba enweghị mmesi obi ike na a ga-agbapụta ha ma ghara inwe udo nke obi n'ihi na e nweghị Mmụọ Nsọ na okpukpe a. A na-ewere mmụọ nke Onye Nsọ dị ka Djibril (Gebriel), ya mere ndị Alakụba na-achọkarị ihe àmà dị mkpa maka okwukwe ha. Ha chọrọ ịbụ ndị akaebe anya na tebụl, ọ bụghị ihe Isa mere. Tebụl na ihe dị na ya bụ ihe dị mkpa n'atụmanya ha.
● N'ụzọ dị ịtụnanya, Ọkpara Mary anaghị ekpegara Allah ekpere, ma Allahumma (Elohim). Aha a maka Muhammad yiri ka obu isi ihe n'enye aka n'ekpere nke puru iza ya ngwa ngwa. Chineke bu uzo nke Allah ma nwere ihe puru ime ka odidi nke odidi nke Atọ n'Ime Otu. Na kor'an Isa kpọrọ Chineke nke agba ochie "CHINEKE (Allahumma) Onyenwe anyi". Nke a bụ ihe megidere ihe "Onyenwe anyị" kpugheere Moses mgbe ọ sịrị, "Abụ m Jehova bụ Chineke gị!" Muhammad gbalịrị ịsọpụrụ Chineke nke Agba Ochie.
● Isa na kor'an kpọrọ oriri nke si n'eluigwe bụ oriri pụrụ iche maka onye ọ bụla, maka ndị kasị nta na ndị kasị ukwuu nke ndị na-eso ụzọ Kraist. Ma eleghị anya, Muhammad n'echiche ya gwakọtara tebụl nke nri anyasị nke Onyenwe anyị na nri nke 5.000 dịka otu. Ọ kpọrọ oriri a sitere n'eluigwe bụ ihe ịrịba ama. Amaokwu nke ise nke kor'an ka a na-akpọ "oriri" ahụ (al-Ma'ida).
● Nwa nke Meri gwakwara Allah ka o nye ihe nile ndi di ya mkpa mgbe nile. Na Islam okwukwe pụtara azụmahịa (Sura Fatir 35:29-30) na kwesịrị ime ka ihe ịga nke ọma. Allah abughi nna ma obu sultan onye n'eme ka ndi Alakụba ya nye ya - oburu na o choro ya.
● Allah nabatara n'ekpere ekpere Isa, nke dị ịrịba ama na Islam. Mgbe Isa ka na-ekpe ekpere, Allah malitere ịkụda ndị na-eso ụzọ agụụ agụụ Isa.
● Otú ọ dị, mmetụta dị n'akụkụ nke ọrụ ebube Jizọs bụ egwu. Chineke na-ama onye ọ bụla na-ekweghị ekwe ekweghị ekwe egwu n'etiti ndị na-eso ụzọ ya ahụhụ kachasị njọ ọ bụla ọ ga-eme na ụwa a na nke ọzọ. A na-enyekwa ndị Alakụba (!) Ihe iyi egwu a ọ gwụla ma ha kweere na ọrụ ebube nke Isa dị ka e dere na kor'an.
● Ndị nkọwa nke kor'an na-atụle ụdị nri dị iche iche dị na tebụl karịa ụdị onye nyere onyinye nke eluigwe. Ndị Alakụba ga-achọ ịma ma mmanya, anụ ezi na nri ndị ọzọ a machibidoro iwu na-echere ha na paradaịs, ma chefuo onye mere ka tebụl ahụ si n'eluigwe bịa. Ihe ka ọtụtụ n'ime ha adịghị aghọta na ọbụna n'Ala Islam nwa nke Mari nwere ohere ịrịchitere ndị na-eso ụzọ ya ekpere.
When you tell Muslims that Jesus had only five loaves of bread and two fishes in his hands to feed the 5.000, you can see long faces, because bread and fish are not deemed as special food of paradise.
● Mgbe ị gwara ndị Alakụba na Jizọs nwere nanị ogbe achịcha ise na azụ abụọ dị n'aka ya iji zụọ 5.000, ị nwere ike ịhụ ihu dị ogologo, n'ihi na achicha na azụ abụghị ihe oriri pụrụ iche nke paradaịs.
● Ma ọ bụrụ na ị na-akpali ndị na-ege gị ntị n'echiche ahụ na Jizọs nyere ekele maka ntakịrị ihe o nwere n'aka ya, mgbe ahụ, n'ekele ya, ọ ghọrọ nnukwu nri. Mgbe ahụ, ị nwere ike ịkọwara ndị Alakụba na ịnweta nri na ego abụghị ihe àmà nke eziokwu, ma okwukwe ahụ n'ekele ga-ewetara ọtụtụ ndị ngọzi.
● Anyị maara na Jizọs n'onwe ya bụ ebe etiti ọrụ ebube a, karịa ịba ụba nke achịcha ahụ. Onyenwe anyị na-emesi anyị obi ike na ọ na-enye ndị nile na-eso ya nri ụbọchị, na-atụkwasị ya obi ma na-ekele ya tupu oge eruo maka nlekọta ya. Nke a dị iche na ihe kor'an na-akụzi. Ihe amara nke Akwụkwọ Nsọ nke Chineke bụ Nna nwere ike igbanwe echiche nke sultan na-emeghị ihe ọjọọ onye na-azọpụta onye ọ bụla ọ chọrọ, na onye na-eduhie onye ọ bụla ọ chọrọ.
● Ozi dị ịrịba ama nke ọrụ ebube a dị na kor'an bụ ihe àmà na ọ bụ naanị onye ogbugbo n'etiti Chineke na ụmụ mmadụ. Ọ bụ ebe nzuzo na ọrụ ebube a nke ọ bụla Muslim nwere ike ịghọta ma ọ bụrụ na ọ dị njikere. Ekpere n'aha nke Kraist bu kwa ndi kwere ekwe. Kraịst emeghere anyị ụzọ Chineke. Enweghi uzo nye Nna ma obu site na ya. "N'ihi na Chineke di otua na onye ogbugbo di n'etiti Chineke na madu, nwoke ahu bu Kraist Jisos" (1 Tim 2:5, Sura al-Anbiya '21:28).
Na kor'an anyị na-achọta ọtụtụ amaokwu nke na-agba akaebe na ikike nke Kraịst n'elu Torah. Akụkụ abụọ nke amaokwu ndị a na-akpọ àgwà ya na njikwa ya nke Akwụkwọ Nsọ nke Agba Ochie bụ ihe ịrịba ama na ihe àmà nke ọrụ Chineke ya (Sura Al-Imran 3:50-51, Al-Ma'ida 5:46-47; al- Zukhruf 43:63). Ihe ndi ozo nke oru ebube a kwesiri iburu n'uche:
● Allah zitere Kraịst n'ime ụwa iji kwado na enweghịzi nke Torah. Gịnịzi mere ndị Alakụba ji ekwupụta ugboro ugboro na emehiela Torah? K'anụ n'onwe ya na-agọnahụ nke a na-ekwu ọtụtụ ugboro. Ke adianade do, Kraịst bụ okwu nke Chineke ahaziri onwe ya ma si otú a na-anọchite anya Torah na ndụ ya (Suras Al 'Imran 3:50, al-Ma'ida 5:46 et al.).
● Allah n'onwe ya kụziiri Ọkpara Mary - tupu a mụọ ya - Torah, Ilu Solomọn, Oziọma na Akwụkwọ Mbụ na ihe niile o dere (Sura Al-Imran 3:49). Ya mere, Isa nwere ike ịbịakwute ụmụ Israel site n'amamihe Chineke ma kọwaara ha ajụjụ niile a na-agbaghaghị agbagha nke iwu ahụ, si otú a wepụ ihe kpatara nkewa ha.
● Dị ka kor'an si kwuo, Kraịst nwere ikike ịgbanwe na ịkagbu iwu ụfọdụ nke Allah n'ime Torah, na ịtọhapụ ndị na-eso ụzọ ya n'aka ha. Ya mere nime Islam, Isa bu onye ome iwu. Ọ bụghị n'okpuru iwu dị ka onye isi. Nke a pụtara ihe karịrị ọrụ ebube nye ndị Alakụba, n'ihi na ọ bụ ha ka Allah bụ onye omebe iwu na onye na-ekpughe Iwu ahụ. Dika kor'an Kriast nwere oru Chineke a n'ihi na ya onwe ya bu okwu nke Allah nime anu aru. Ọ bụ eziokwu Chineke na iwu n'onwe ya (Jọn 13:34, Sura Maryam 19:21, al-Anbiya '21:91, al-Tahrir 66:21 na ndị ọzọ).
N'amaokwu ndị a nke kor'an anyị na-anụ nzaghachi nke Islam si mkpughe nke Jizọs, "Unu echela na abịawo m ibibi Iwu ahụ ma ọ bụ ndị amụma, abịaghị m iwepu ma mezuo ha." (Matiu 5:17-18) O kwukwara, "A gwara ndị mmadụ na mbụ ... Ma ana m agwa gị!" (Matiu 5:21-48) "Ihe na-abanye n'ọnụ mmadụ adịghị eme ka ọ bụrụ onye na-adịghị ọcha, kama ihe na-esi n'ọnụ ya apụta, nke ahụ na-eme ka ọ bụrụ onye na-adịghị ọcha." (Matiu 15:11.16-20)
Muhammad nwere ike ịnụ banyere ụkpụrụ mgbanwe ndị a Kraịst kụziri, ma ọ ghọtaghị ha dịka mmezu nke Iwu, kama dịka iwepụ ụfọdụ ihe mgbochi nke Iwu maka ndị na-eso ụzọ ya. N'ụzọ dị ịtụnanya ọ sịrị na ọ bụ Aịza ikike a nke Chineke iji kpochapụ iwu ma weta ndị ọhụrụ dika onye ozi nke Allah.
● N'agbanyeghị mgbanwe niile nke Iwu site n'aka nwa nke Mary, ọ na-akwado isi nke ofufe Islam: "Tụọ egwu Allah!" Islam adịghị achịkwa ịhụnanya nke Chineke maka ụmụ mmadụ, ma ọ bụ site na ịhụnanya ha nwere n'ebe ọ nọ. Enweghị nna nke Chineke, ọ dịghịkwa ọchịchọ ịzọpụta mmadụ niile, kama ọ bụ ike, ikike zuru oke na ọbụbụeze nke Allah, bụ onye, dịka onye ọchịchị aka ike, enweghị ike ịjụ ajụjụ ma ọ bụ bụrụ onye ọ bụla maka ihe ọ bụla. Ndị Alakụba ga-akpọ isiala n'ihu ya ma jiri egwu na-efe ya.
● E kwesịrị inye onye ozi ọ bụla sitere n'aka Allah ụdị nrube isi ahụ. Na kor'an, nwa nke Meri na-achọ n'aka ndị Juu niile, ndị Kraịst na ndị Alakụba ugboro abụọ: "Rube m!" (Sura Al-Imran 3:51; al-Zukhruf 43:64). Nke a na okwu amama Islam kpam kpam kpodoro isi ala! Onye obula ga-asọpụrụ Kraist Jizos, rara onwe ya nye ya ma debe iwu ya nke oma, dika ha na-atu egwu Allah! Islam adịghị akụzi, "Kwere na amara nke Allah, ma ọ bụ kweta mgbaghara nke Kraịst ma ọ bụ hụ ya n'anya n'ihi na ọ hụrụ gị n'anya nke mbụ," ma Isa chọrọ ka okwukwe-nrubeisi na nrubeisi na-enweghị isi n'okpuru ikike ya. Onye ọ bụla nke ghọtara iwu a nke kor'an nwere ike ịchọpụta na ọ bụ ụzọ dị mfe maka izisa ozi ọma ndị Alakụba. Onye Alakụba kwesịrị ibu ụzọ mụta iwu nke Kraist, tupu a kụziere ya amara nzọpụta ya. Anyị kwesịrị ibu ụzọ mụọ ya 510 iwu Kraist n'ime Oziọma anọ ahụ wee jiri ha tụnyere iwu 613 nke Moses na Torah. Mgbe ahụ, anyị kwesịrị ibi ndụ dịka Iwu Jizọs si dị ka ezi ihe nlereanya ma kwupụta n'ihu Onye Alakụba na anyị niile anaghị emezu iwu ya nile, na ya mere anyị aghaghị ịrịọ mgbaghara kwa ụbọchị. Onye Alakụba kwesịrị ịghọta na ọ gaghị ekwe omume imezu iwu nke Kraịst n'onwe anyị n'ihi na ọ na-enye anyị iwu, "Bụrụ zuru oke ... dịka Nna gị nke eluigwe zuru okè!" (Matiu 5:48) na "Na-ahụrịta ibe unu n'anya, dika m hụrụ unu n'anya." (Jọn 13:34) Mgbe ahụ, o nwere ike ịghọta na ọ dịghị onye nwere ike imezu iwu nke Kraịst n'onwe ya, ma ọ dị mkpa mgbaghara nke Jizọs na nzọpụta ya kwa ụbọchị. Onyinye nke Kraist Jisos bu nani uzo nke Nna (Jon 3:16; 14:4 et al.).
● Muhammad kwụsịrị ngwa ngwa na nkwubi okwu ndị dị egwu site n'ime ka Kraịst Jizọs kwuo, sị, "Allah bụ Onyenwe m na Onyenwe gị, fee ya ofufe, nke ahụ bụ ọrụ kwesịrị ekwesị." O kweghị ka Isa na kor'an kwuo, sị: "M ga-arịgokwuru Nna m na Nna gị, Chineke m na Chineke gị!" Mba, Muhammad mere ka Isa n'okpuru ike na ikike Chineke. Muhammad adigh njikere njikere ikweta na Kraist Jisos bu Jehova n'onwe ya iji nye Chineke Nna ya otuto. Mgbe ọ nabatara ụkpụrụ ụfọdụ dị mkpa nke okwukwe Ndị Kraịst, ọ mesịrị jụ isi ya ma mee Ọkpara nke Mary ka ọ bụrụ ohu nke Allah, onye ga-eduga ụmụazụ ya na paradaịs n'ụzọ "sara mbara" nke Iwu islam.
N'agbanyeghị ihe ndị a nke Islam, Muhammad kwadoro Kraịst Jizọs dịka onye mmechite iwu nke Chineke nke nwere ikike ịjụ nrube isi nke ụmụazụ ya na nke mmadụ niile. Anyị kwesịrị ime ka ndị niile na-achọ Muslim mara ozi a nke ndị Koran, ma nyere ha aka - site na mgbagha ime mmụọ nke nganga ha - ịnakwere amara nke Kraịst maka ha.
Na kor'an, e nwere ọtụtụ amaokwu ndị na-akọwa àgwà Ndị Kraịst n'ụzọ dị mma. Site na ihe akaebe nke Muhammad onye na-amata na Ọkpara Mary nwere ike ịgbanwe ndị mpako ka ha bụrụ ndị dị umeala n'obi na ndị ego n'ime ndị ọrụ ebere. Nke a bụ ọrụ ebube kachasị ebube Kraịst mere dika akwụkwọ ndị Alakụba. Ngbanwe a emeghị naanị otu ugboro, mana ọ na-eme kwa ụbọchị, mgbe ahụ ma ugbu a. A kọwara Ndị Kraịst ihe karịrị ugboro 50 na kor'an. Ụfọdụ n'ime amaokwu ndị a ekwughị banyere Ndị Kraịst naanị, kama banyere ndị Juu (Sura Al-Imran 3:55.113-114.199, Al-Ma'ida 5:65-68, Al-An'am 6:90; al-Hadid 57:27, al-Tahrir 66:114 et al.).
Na Sura Al-Imran, anyị na-agụ ntụle nke Muhammad nye ndị nnọchiteanya Ndị Kraịst si North Yemen (Wadi Nadjran), bụ ndị kwurịtara okwukwe ya na Medina ruo ụbọchị atọ. Ọ gbalịrị iji merie Ndị Kraịst a ka ha gaa Islam ma kwe ka Allah sị Aịza:
"M ga-edebe ndị na-eso gị n'elu ndị na-ekweghị ekwe ruo ụbọchị nbilite n'ọnwụ." (Sura Al-Imran 3:55)
Muhammad na ndị Alakụba ya masịrị ndị ikom 60 ndị si na Ndị Kraịst nọ na North Yemen. Muhammad chere na ọdịbendị ha dị elu karịa nke ya, kama ọ chọrọ ịdọrọ ha banye na Islam. Ọ hụrụ na ha dị elu na ikike akụnụba karịa ndị na-ekpere arụsị na ndị na-agba egwú. Ma, n'eziokwu, na mkparita uka ya, o kpugheghi ezi echiche ya, ya bu, ndi Alakụba, n'ezie, na ọkwa karia ndi Kristain.
Na otu Sura anyị na-agụ banyere ndị ohu na ndị ọrụ na-ezute n'abalị iji na-agụkọ Akwụkwọ Nsọ, ma na-efe Onyenwe ha site n'ikpere arụsị. Ndị a bụ ndị Kraịst na-ekpe okpukpe, n'ihi na ọ dịghị ụka ọ bụla, ọbụnadị ndị Juu, na-adabere n'ozi ha. Muhammad kwetara na ha debere ọgbụgba ndụ ha na Chineke nakwa na ndụ ha kwekọrọ n'okwukwe ha. Ọ kpọrọ ha "Ezi" ndị Chineke ga-akwụghachi ụgwọ (Sura Al-Imran 3:113-114). Nso akwa ntiense aban̄a mme Christian emi ẹkedude ke ẹdude ke Hidjaz!
Dị ka Sura Āl 'Imran Muhammad zutere Ndị Kraịst bụ ndị dị obi umeala ma dị obi umeala, ndị sụgharịrị amaokwu ndị sitere na Baibul n'ebughị ụzọ rịọ maka ego, dị iche na ndị Juu nọ na Medina bụ ndị na-agwa ya naanị ihe Mishna ma ọ bụ Talmud mgbe mbụ ọ zụtara ya ihe si n'aka ha (Abu Imran 3:199). Otutu oge, ndi Kristain dika kor'an si gbalie izisa ozi oma Muhammad, ma n'efu.
N'akwụkwọ Surah al-Ma'idah, a na-adọta eriri nkewa n'etiti ndị Juu na ndị Kraịst. Allah kwesiri ikpughere Muhammad:
"Ị ga-achọpụta na ndị na-emegide gị (ndị kwere ekwe Muslim) na oke iro bụ ndị Juu na ndị na-ekpere arụsị, ị ga-achọpụtakwa na ndị na-emegide gị ma nwee ọmịiko kasịnụ n'ebe ndị kwere ekwe nọ (ndị Alakụba) bụ ndị ahụ ndị na-akpọ onwe ha Ndị Kraịst (Nasara), n'ihi na ha nwere ndị ụkọchukwu na ndị mọnk n'etiti ha na (n'ihi na) ha adịghị mpako (gbaa .: ha anaghị eme onwe ha nnukwu)." (Sura al-Ma'ida 5:82)
Muhammad ghọtara ịdị umeala n'obi nke Kraịst n'ime ndị na-eso ụzọ ya, bụ ndị na-anwaghị ime onwe ha nnukwu. N'otu oge ahụ, Muhammad ghọtara na àgwà a esiteghị n'ime onwe ha kama ọ sitere n'aka ndị ndú ime mmụọ ha. Amaokwu a na-enye mmasi dị ebube banyere ịdị umeala n'obi nke Ndị Kraịst n'oge Muhammad.
Na Sura al-Hadith inwere ike iguta ihe omimi banyere ndi Kraist. Muhammad ka Allah kpughee,
"N'ikpeazụ, anyị kwere ka Isa, nwa nke Mary, soro (ndị ozi anyị gara aga), nyekwa ya Oziọma ma tinye n'obi ndị na-eso ya ebere-ebere, ebere na monasticism." (Sura al-Hadid 57:27)
Muhammad di iche n'etiti ndi di iche iche nke ndi Kristain: Omara ndi choro dika ndi neso uzo, ndi dike na ndi nenye aka ndi di njikere ibu agha maka ozizi ohuru, ndi kwere ekwe nke oma na ndi n'ekpere ekpere ndi gbaliri ime dika nkwenye ha, ezi ndi Alakasi onwe ha nye Allah na onye ozi ya (Kraist) ma rara onwe ya nye ya n'enweghị ihe ọ bụla, ndị na-eso ụzọ ya bụ ndị gbalịrị iṅomi nna ha ukwu ma soro ya gafee oke ma dị njọ, na ndị akaebe nke omume ya ndị dị njikere ịnwụ n'ihi àmà ha. Ha jụrụ Isa maka otu ihe, na ọ ga ede aha ha n'Akwụkwọ nke Ndụ n'eluigwe (Sura Al-Imran 3:52-53).
Dị ka Muhammad si kwuo, ọ bụghị Ndị Kraịst nile na-ekere òkè na nzuzo nke ọrụ ebube kachasị elu nke Kraịst mere - ma e wezụga ndị na-eso ụzọ ya! Muhammad chere na Allah n'onwe ya ji aka ya rụọ ọrụ ebube. O tinye ihe n'ime obi ha nke o nweghi onye ozo nwere: ebere na obi ebere, obuna ndi iro ha! Mgbe Muhammad tụgharịrị uche banyere mmalite nke charisma a, ọ chọtaghị ebe ọ bụla ọzọ maka ya ma ọ bụ Oziọma, nke sitere n'aka Allah ruo Isa. Muhammad kweere na ọmịiko na ebere n'obi ndị na-eso ụzọ Kraịst si n'akwụkwọ a pụta. Ma ọ maghị ike nke Mmụọ Nsọ nke Pọl na-ede, sị, "A wụkwasịrị ịhụnanya nke Chineke n'ime obi anyị site na Mmụọ Nsọ e nyere anyị." (Rom 5:5)
Muhammad nwere mmetụta nke ezi Ndị Kraịst. Ọ bụghị naanị na ọ maara Waraqa b. Naufal, nwa nne nna ya nke mbụ bụ Khadidja, okenye dị nsọ nke otu ezinụlọ Bible n'ụlọ Mekka, ma ọ hụkwara na ndị Alakụba 83 nwere ebe obibi na Ndị Kraịst na Abyssinia mgbe mkpagbu nke ndị Alakụba na Mekka ghọrọ ihe a na-apụghị izere ezere. Àgwà nke Ndị Kraịst Abyssinian mere ọdịdị nke Ndị Kraịst nọ na kor'an ka anyị na-eche. Otú ọ dị, ndị Abyssinia ahụghị ozi ọma ndị Alakụba gbara ọsọ ndụ. Mgbe ndị Alakụba laghachiri Medina mgbe Islam ghọchara ndị siri ike, 230 ndị Etiopia anabatala Islam, ma ọ bụ nanị otu onye Alakụba ahụ ghọrọ Onye Kraịst. Onye ahụ nwụrụ obere oge mgbe ọ gbanwechara (ikekwe ọnwụ ọnwụ).
Na Sura al-Saff, a na-akpọ Ndị Kraịst ndị na-enyere ha na ndị ọrụ Chineke aka mgbe ha ṅụrụ iyi na ha ga-ekwesị ntụkwasị obi nye Isa n'oge ọnwụnwa ya ma dịrị njikere ịlụ ọgụ maka ya. Allah mesiri ha obi ike na mmeri ndi iro ha (Sura al-Saff 61:14).
Mgbe ị gụrụ amaokwu ndị a dị na kor'an, ị chọpụtara na Muhammad hụrụ na Isa agbanwewo ndị na-eso ụzọ ya n'onyinyo ya. Ha hụrụ ndị iro ha n'anya, gọzie ndị na-akpọ ha ọnụ ma meere ndị na-akparị ha ma kpagbuo ha (Matiu 5:44). Ha dị umeala n'obi, dị umeala n'obi, ọ bụghị anyaukwu, ma na-ekpe ekpere n'ekpere ha, ọbụna n'abalị ma ọ bụrụ na ọ dị mkpa. Akwụkwọ ha bụ ebe etiti ofufe ha. Ndị Kraịst a, bụ ndị a kọwara na kor'an, na-abụkarị ndị mba ọzọ, ma ndị Arab si n'ebe ugwu, n'ebe ndịda na n'ebe ọdịda anyanwụ nke Arabe Peninsula. Kraist mezuru ihe ebube ya kachasie ike nime ha: ha biri dika ihe ha kwere ma buru ndi ozo site na amara nke onye nzoputa ha. Taa, ndị Alakụba na-achọta ụdị ọhụrụ ha dịka Ndị Kraịst nke Akwụkwọ Nsọ kọwara na kor'an. Amaokwu ndị a nwere ike inyere ha aka mgbe ha na-agwa ndị ikwu ha Islam okwu.
Ugboro abụọ anyị na-achọta na kor'an na Kraịst Jizọs na nne ya bụ ihe ịrịba ama dị ịrịba ama Allah mere (Suras al-Anbiya '21:91, al-Sajda 32:50). Ozugbo e kpughere na Kraịst n'onwe ya bụ ihe ị rịba ama maka ndị mmadụ na ebere nke Allah (Sura Maryam 19:21). Amaokwu atọ a kwadoro ihe omimi nke Kraịst na kor'an ma chịkọtara ihe kachasị ọrụ ebube ya niile. Nzube nke ebube ya abughi nke onwe ha kama dika mkpughe nke ya, onye neme ha.
N'asụsụ Arabic, okwu maka akara bụ ajatun nke pụtakwara ọrụ ebube. Gụ ya na okwu Allah abụọ okwu abụọ a na - eme ka aha Ayatollah bụrụ onye a ma ama! Kraist Jizos bu ihe iriba ama nke Allah! Ihe edere na kor'an na-eme ka okwu a pụta ìhè ma gosipụta nzube ya: maka ụmụ nwoke! Onye obula kwesiri ihu oke omuma na ihu n'anya nke nwa nke Meri. Ọ dịghị onye amụma ọzọ, eze ma ọ bụ onye nchụàjà na-eburu aha a nke nsọpụrụ dịka kor'an, ọ bụghị Muhammad. Kraist bu nani ihe ebube nke Allah nke madu nile kwesiri ighota. Ndi Ayatollah ndi ozo natara ugwo ha site na madu.
Mgbe anyị jụrụ ihe mere nwa nke Mary ji bụrụ ihe ịrịba ama kachasị mma nke Allah na kor'an, anyị na-achọta azịza nke nkwenkwe Islam na Allah kere Kraịst n'ime Meri nanị site na okwu ya, n'enweghị òkè nke nna mmadụ. Chineke tinyere mmụọ ya n'ime ahụ ya. Ya mere, Kraist abughi nani nwoke sitere na nwanyi, kama, dika kor'an si di, ya bu kwa mo nke Chineke. Isa nọ na Allah ọbụna tupu a mụọ ya. Mgbe ọ rịgoro, ọ laghachiri Allah na ahụ, mkpụrụ obi na mmụọ. Taa, Jizọs na Allah dị ndụ. Muhammad anwụọla. Kraist Jisos bu nani nwoke a puru ikpo "Spirit nke Allah" na "okwu ya incarnate". Ya mere Kraist bu nani ihe omuma nke Allah maka madu nile. From this dual quality – being a true man and a true spirit from Allah - all his signs and miracles occurred, according to the Qur'an: Site na nka abua - idi ezi madu na ezi mo nke Chineke - ihe iriba ama ya nile na ihe ebube ya mere, dika kor'an si kwuo:
Ọ bụ okwu Allah incarnate. O nwere ike ikwu okwu dị ka nwa amụrụ ọhụrụ na nwata
.Ọ bụ onye okike nwere ume na-enye ndụ - ya na ikike Allah!
O juputara n'amara nye ndi aru na ndi njo. Ọ gwọrọ ndị niile bịakwutere ya.
Ọ bụ dọkịta kasị mma n'ụwa - ya na ikike Allah!
Ọ bụ onye meriri ọnwụ, n'ihi na ọ kpọlitere ndị nwụrụ anwụ - na ikike Chineke!
Ọ maara ihe niile, n'ihi na "anya-x" ya nwere ike ịhụ site na mmadụ niile na ihe niile.
O nwere ikike ịrịọchite ọnụ dị ka onye ogbugbo n'etiti Allah na ndị na-eso ụzọ ya.
O si n'ala paradaịs wetaara ha nri ma nye ha nri ha na-adị kwa ụbọchị!
Ọ bụ onye na-enye iwu ma kwenye na enweghịzi iwu nke Torah. Ọ gbanwere iwu Chineke ma debe iwu ọhụrụ.
O ruuru ya ịchọ ka okwukwe-nrubeisi sitere n'aka mmadụ nile, gụnyere ndị Alakụba.
Ọ gbanwere ihe ndị na-eme ka ndị na-eso ụzọ ya nwee obi ụtọ ma jupụta n'ịhụnanya na ịdị umeala n'obi.
Ihe ịrịba ama ndị a dị na kor'an dị ka enyo nke na-egosipụta àgwà na àgwà nke Isa, nwa nke Meri. Ha na-egosi na ọ bụ ọrụ ebube nke ọrụ ebube niile.
Akwukwo nso Jisos nwere ike ichoputa ya ugboro ugboro n'amaokwu nke kor'an. Muhammad gụnyere ọtụtụ n'ime okwukwe ndị Kraịst n'ebe ahụ iji gosipụta ya kor'an dị ka Oziọma, nke mere na a ga-arara Ndị Kraịst ịra Islam. Obughi mgbe niile naegosi nao jorochi nke Kraist, maob ghi kwa nao ghafuwo] gide Jizos n'obe. O kwetara na Ọ bụ onye na-arụ ọrụ ebube, onye dọkịta, onye na-akpọlite ndị nwụrụ anwụ na onye omebe iwu iji dọta Ndị Kraịst na Islam.
Ya mere, anyị nwere ikike iwepụta àmà gbagọrọ agbagọ nke Ndị Kraịst si na kor'an ma tinye ya n'ime ihe ziri ezi nke Oziọma dum, dịka eziokwu na ụzọ nke udo na Chineke. Ebumnuche ọ bụghị nanị igosi iwu na amara, iwu na nrubeisi n'okwukwe, ma were ese onyinyo nke ezigbo Kraịst n'ihu ndị Alakụba, ka ha wee hụ ya, hụ ya n'anya, kwere na ya, jidesie ya ike ya, nata ndu ebighebi ya ma buru mkpuru nso nke Mo ya.
N'ihi nke a, Jizọs kpọrọ onwe ya ìhè nke ụwa, nri nke ndụ, ụzọ ziri ezi, eziokwu ebighi ebi, ezigbo onye ọzụzụ atụrụ, ezigbo osisi vaịn, mbilite n'ọnwụ na ndụ, eze (na okpueze ogwu), mbụ na nke ikpeazụ. Okwu nke Jisos nime ozioma puru ighota onye nchoputa nke ndi nchoputa ka ha ghọta na Jisos abughi nani onye neme ihe ebube kama ihu Chineke na idi nso ya.
5.15 -- NNYOCHA
Ọ bụrụ na ị mụọ akwụkwọ a jiri nlezianya, ịnwere ike ịza ajụjụ ndị a n'ụzọ dị mfe. Onye ọ bụla zara 90% nke ajụjụ niile n'akwụkwọ nta asatọ nke usoro isiokwu a n'ụzọ ziri ezi, nwere ike inweta akwụkwọ ikike site na etiti anyị
Ole oru ole na ole ka Mozis ji kpoo kor'an? Kedu ihe ha na-ekwu na ihe ha chọrọ?
Ugboro ole ka anyi puru iguta banyere ihe àmà (bayyinaat) nke Kraist nime kor'an? Kedu ihe bụ àgwà na ebumnuche ha?
Ònye bụ Mmụọ nke Nsọ ahụ nke dịka kor'an si wusie Kraịst ike ịrụ ọrụ ebube ya? (Sura al-Baqara 2:87, 253, al-Ma'ida 5:111 et al.)
Gini ka Muhammad si gbali ijigide onwe ya dika onye am ma na iheàmà nke Kraist? (Sura al-Saff 61:6)
Ugboro ole ka Muhammad ji okwu akara (aayat) maka ihe ebube nke Kraist nime kor'an? Ebee n'ime Oziọma ndị ahụ, anyị nwere ike ịgụ otu okwu maka ọrụ ebube nke Kraịst? Kedu ka okwu a si dị iche na akwụkwọ abụọ ahụ?
Gini mere Jizos ji lee icho ihe ebube dika ekweghikwe maob ihe obula nke nwara Chineke dika Ozioma ah si di?
Olee ihe ndị Muhammad kwuru banyere akụkọ banyere nwa ọhụrụ ahụ bụ Isa kwuru ozugbo ọ mụsịrị ya? Gini mere Muhammad ji kwenye ma kwenye n'akwukwo akuko di otua?
Olee otua ka akwukwo a banyere Isa nime nkpughe nke Allah si gosi na Muhammad abugh onye amuma n'ezie?
Gini bu ihe di egwù nke di icheiche nke okwu mbu nke Kraist nime kor'an? (Sura Maryam 19:24-26)
Gini ka Muhammad si lee anya nwa nke nwoke bụ Isa? nwa nwa ya bụ Isa
N'ihi gịnị ka okwu ahụ bụ "M mepụtara" na nkọwa nke akọwa nke ọrụ ebube nke Ọkpara Mary ji dị mkpa ná mkparịta ụka anyị na ndị Alakụba?
Gini ka anyi puru igbusi site na iku ume nime anu ugwo dika nnunu na kor'an na-ekwu na nnunu ahu gbapuru? Ebee n'ime Oziọma ndị ahụ ka anyị nwere ike ịgụ na Jizọs na-eku ume n'ahụ ndị mmadụ n'ezie? Kedu ihe dị iche iche nke iku ume Kraịst na kor'an na n'Oziọma ndị ahụ?
Olee otú Muhammad na kor'an si gbalịa ịkwụsị ikike nke Isa ịrụ ọrụ ebube ya? Ntak emi Jesus ke idemesie ama ekeme ndinam utịben̄kpọ ke John 5:19?
Ruo ole ndị kpuru ìsì ka Kraịst meghere anya ha dị ka kor'an? Oleekwa otú o si mepee anya ha dị ka ihe dị iche iche nke Muhammad?
Olee otú e si emejọ ekpenta ma nyochaa ihe na-adịghị mma n'ọtụtụ mba na Asia na Africa?
Gịnị ka ikike nke Kraịst iji gwọọ ndị ekpenta gụnyere?
Gịnị ka nlekọta nke Ọkpara Mary maka ndị ọrịa na ndị nhụjuanya na kor'an na-ekpughe?
Ole madu ole ka Kraist nwuru ma mee ka ha di ndu dika ndi Qru'an?
N'ihi gịnị ka Kraịst ji bụrụ nanị onye nọ n'ụwa nwere ike ịkpọlite ​​ndị nwụrụ anwụ dị ka kor'an ahụ si dị?
Olee ihe nzuzo anyị nwere ike ịkọwara ndị Alakụba n'ihi echiche nke Islam na Kraịst nwere ike ịrụ ọrụ ebube ya site n'enyemaka nke Mmụọ si Allah?
Olee otú Isa na kor'an si egosi na ọ maara ihe niile? Kedu ka anyị ga esi eji ihe nzuzo nke Jizọs maara ihe niile na mkparịta ụka anyị na ndị Alakụba?
Olee otú al-Suyuti si kwuo banyere kor'an mgbe o jiri ọdịnala (Hadith) banyere Jizọs kọwaa Ọkachamara Ya niile?
Gini bu ihe kachasi gi ike na akuko nke kor'an banyere okpokoro si n'elu igwe nye ndi neso Isa?
Gịnị mere Jizọs ji kpee ekpere "Allahumma" ma ọ bụghị "Oh Allah"?
Olee otú Muhammad si gosipụta na Kraịst nwere ikike ịgbazi n'etiti ụmụazụ ya na Allah? GŽnŽ mere Onye puru ime ihe niile ji zaa] n] nwa nke Meri n 'z]] z]?
N'ihi gịnị ka Kraịst pụrụ iji gbanwee Iwu Mozis e dere n'ike mmụọ nsọ? Didie ke enye ekeme ndinyịme mme anditiene enye ke Abasi ọfiọk? Kriast dika kor'an nwere nani ndi isi ma obu ndi ome iwu?
Ntak emi Isa ke kor'an na-ekwu okwu banyere egwu Chineke ma ghara inwe ihe banyere ịhụnanya nke Chineke?
Gini bu iwu nke Kraist nime kor'an "Gee m nti!" pụtara maka ndị Alakụba niile? Ntak emi nnyịn ikpenyene ndikpep Ibet Christ ke ntak mmememe ye mme Muslim?
Olee otú Muhammad si jiri okwu egwu na-agbalị ịhapụ ikike Kraịst ma mee ka ọ bụrụ onye Alakụba na-asọpụrụ Chineke?
Olee utu aha na aha dị iche iche ka Muhammad mere iji kọwapụta ọnọdụ dị iche iche nke ntozu okè nke ụmụazụ Kraịst? Gịnị mere o ji kpọọ ha "ndị Alakụba"?
Olee àgwà ndị pụrụ iche Muhammad ji mee ihe iji mara ndị na-eso ụzọ Kraịst? Kedu ebe o si mara àgwà ndị a?
Gini mere mgbanwe nke ndi mmehie nke náeme onwe ha ka ha bia nime ndi ozo nke Onyenwe anyi bu ihe kachasi ebube niile nke Kraist?
Gini mere Isa na kor'an bu nani nwoke Ayatollah nke Chineke choputara n'akụkọ ihe mere eme? Kedu ihe aha a pụtara na ihe aha Kraist nwere ike ịchọta na Oziọma ndị ahụ?
Olee otú Muhammad si kọwaa ma mee ka aha ahụ bụ Ayatollah baara Kraịst? Gini ka oputara na na Islam Kraist bu ebere nke Allah?
Olee utu aha iri na omuma dị iche iche nke Kraịst nwere ike ị nweta n'aka ọrụ ebube nke Kraịst na kor'an?
Ntak emi Muhammad eketịn̄de aban̄a Christ ke usụn̄ emi ẹkedọhọde enye?
Olee otu anyi puru isi jiri oru ebube nke Kraist n'ime kor'an dika uzo nye ezi ozi oma? Kedu ihe dị oke mkpa maka ịme ihe mgbaru ọsọ a n'ime ọrụ ndị dị irè n'etiti ndị Alakụba?
A na - enye onye ọ bụla nọ na ajụjụ a ohere iji akwụkwọ ọbụla dị ya mma na ịjụ onye ọ bụla a pụrụ ịtụkwasị obi mara ya mgbe ọ na - aza ajụjụ ndị a. Anyị na-echere azịza gị ndị e dere ede tinyere adreesị zuru ezu gị na akwụkwọ ma ọ bụ na e-mail gị. Anyị na-ekpe ekpere maka gị Jizọs, Onyenwe anyị dị ndụ, na Ọ ga-eziga, duzie, mee ka ike, chebe na ịnọnyere gị kwa ụbọchị nke ndụ gị! gụnyere adreesị zuru ezu gị
Ziga nzaghachi gị: